जाने हैन त ठेट्नो मकै घर ? - Aarthiknews
जाने हैन त ठेट्नो मकै घर ?
काठमाडौँ । नेपाली ठेट शब्द हो ठेट्नो । भुट्दा फुल नउठेको मकैलाई ठेट्नो भनिन्छ । नेपाली मौलिक शब्दलाई इंकित गर्ने यो शब्द स्थानीय मकैको स्वाद पनि भल्काउनँछ । यही स्वादलाई बचाइराख्न नयाँ बानेश्वरको संगम चोकमा खुलेको छ ठेट्ना मकै घर ।
मकैका पारखीहरूलाई यो घरले लोभ्याउँदै छ । बीबीए सकेर विद्यार्थी अभिषेक सिंह साथी ऋचा केसीसँग मकैको फरक स्वाद चाख्न यहाँ आएका थिए । साथीले मकै घरको परिकार भिन्न छ भनेपछि हामी पनि स्वाद लिई हेरौँ भनेर आएको हौँ । ऋचाले भनिन्, ‘ठेट्नो नामै फरक छ । खाना पकाउने शैली र परिकार पनि नयाँ ।’
त्यही मेसोमा मकै घरमा पुगेका थिए ठमेलका अनिल खड्का उनलाई भने मकैको मःम मिठो र फरक लाग्यो । परिकारको मूल्य पनि सबै नेपालीले धान्न सक्ने लागेको उनले बताए । ‘म ठमेलबाट मकैघरको मःम चाख्न आएको हुँ’, खड्काले भने ‘मःमको स्वादै बेग्दै छ । मकैको परिकारको मूल्य पनि ठिकै छ ।’
उक्त मकै घरका मालिक विपिल कँडेललाई केही गर्ने सोचमा भए पनि कसरी सुरु गर्ने भन्ने समस्या थिए । यसलाई व्यवस्थित गर्न उनले मकै पोल्ने मेसिन तयार गर्ने सोचमा इन्टरनेटमा खोजी सुरु गरे । इन्टरनेटमा खोज्दा पनि केही नभएपछि उन आफैँले प्रयास गरे । ६ महिनापछिको प्रयासले मकै पोल्ने मेसिन तयार गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका छ ।